““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း”” (စတုတ္ထပိုင်း) | ဥက္ကာကိုကို
““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း”” (စတုတ္ထပိုင်း)
Posted by oakkarkoko on January 31, 2013
Posted in: ခံစားချက်တွေ, အက်ဆေး, ဆောင်းပါး, ရောက်တတ်ရာရာ, ၀တ္ထု.	1 Comment
ကျနော်တို့နှင့်အတူနေသော ဦးလေးတစ်ယောက်က သူနှင့်အတူလိုက်ပြီး ကူညီရန်ကမ်းလှမ်း သည်။ မုန့်ဖိုး ပဲဖိုးလည်း ရမည်ဆိုသောကြောင့် ကျနော်လိုက်သွားသည်။ သူက နှစ်လုံးထီဒိုင်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မှာ သိပ်မကျင်လည်တတ်သဖြင့် အဖမ်းအဆီးကို လည်းကြောက်ရတာကြောင့် သူက အသိတစ်ယောက်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး မဂ်လာဒုံလေတပ်ထဲမှာ သွားရောင်းသည်။ စစ်တပ်ထဲမှာဆိုတော့ ရဲဖမ်းမှာကိုမပူရတော့ဘူးပေါ့လေ။ သို့နှင့် တနင်္လာ မှသောကြာအထိ မနက်မှ ညနေတိုင် မင်္ဂလာဒုံလေတပ်ထဲက အိမ်ထောင်သည် တန်းလျားတွေ ဆီမှာ ကျနော်တို့နှစ်လုံးသွားရောင်းကြသည်။
တကယ် ရောင်းတာက အဲဒီထဲက ရဲဘော်တချို့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုကော်မရှင်ပေးရောင်းခိုင်း ထားပြီး ကျနော်တို့ က တပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးရဲ့အိမ်ခန်းထဲထိုင်ကာ စာရင်းပေါင်းရသည်။ အလျော်အစားတွေလုပ်ရသည်။ နှစ်လုံးက ၁၂နာရီ ဂဏန်းနှင့် လေးနာရီဂဏန်းဟူ၍ တစ်နေ့မှာနှစ်ကြိမ်ထွက်တာမို့ အလုပ်က မနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။
နေ့လည်ဂဏန်းထွက်ပြီး အလုပ်ပြတ်တာနဲ့ တပ်ထဲက ကန်တင်းမှာသွားထိုင်နေရသည်။ ရိပ်သာတစ်ခုထဲမှာ တီဗီသွားကြည့်ရသည်။ တပ်ထဲမှာလက်ဖက်ရည်သောက်ရင်းနဲ့ ဂျာနယ်တွေကောက်ကိုင်ဖတ်ရှုရင်းအပျင်းဖြေရသည်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော် 7DayNews ဂျာနယ်ကိုစဖတ်ဖူးသည်။ သတင်းဆိုတာ ဒီလိုကြီးတွေပါလားဟုလည်း လေ့လာကြည့်မိသည်။
ထိုအချိန်မှာ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းက စနေပြီဖြစ်သည်။ ဘုန်းကြီးတွေလည်း သင်္ကန်းဖားဖားကြီးတွေနှင့် လမ်းပေါ်ထွက်လာကြပြီ။ လူတွေကလည်း လက်ခုပ်တီးလိုက်၊ သီချင်းဆိုလိုက်၊ မေတ္တာပို့လိုက်ဖြင့် ဘုန်းကြီးတွေ နောက်ကပါလာကြပြီ။ ကျနော်က တပ်ထဲမှာ နှစ်လုံးရောင်းကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တော့ ကျနော်တို့နှစ်လုံး စာရင်းတွက်နေသည့်အခန်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး အပြင်ကပြန်ရောက်လာပြီး သူ့မိန်းမနှင့် သမီးတွေကိုပြောနေသည်။
“မြို့ထဲမထွက်ကြနဲ့တော့ဟေ့… ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကို စစ်တပ်က ပစ်တော့မယ်” တဲ့။
ကျနော် ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ပိုက်ဆံစာရင်းတွေလည်း အယောင်ယောင်အမှား မှားပေါင်းမိကုန်သည်။ နောက်နေ့မှာ တော့ ဆန္ဒပြတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြည်သူတွေကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်နေပြီတဲ့။ လေတပ်ထဲကို ဆူးလေကသတင်းက ချက်ခြင်း ရောက်လာသည်။ လေတပ်ထဲက ရဲဘော်တွေ ငြိမ်သက်နေကြသည်။ ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ စဉ်းစားနေကြတာဖြစ်မည်။
၂၀၀၇၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ ကျနော်မနေနိုင်တော့။ အမေမသိအောင် ဆူးလေသို့ မနက်စောစောရထားဖြင့် လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးလွယ်ကာ ထွက်ခဲ့လာခဲ့သည်။ ဆူးလေရောက်တော့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်။ မြို့တော်ခန်းမအနီး၊
၃၅ လမ်းထိပ်မှာ စစ်သားတွေ သေနတ်ကိုင်ပြီးရင်ဘောင်တန်းရပ်နေကြသည်။ လူတွေက ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ခပ်ကျဲကျဲ။
ကျနော်စစ်သားတွေကိုကွေ့ဝိုက်ပြီး ဆူးလေလမ်းမပေါ်တက်ခဲ့သည်။ ဆူးလေမီးပွိုင့်နားက ကားမှတ်တိုင်မှာ လူတွေနည်းနည်းများနေတာတွေ့ရသည်။ ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်လို့ ကျနော်တွေးရင်း မှတ်တိုင်မှာရပ်နေသည်။
မကြာမီမှာ ငွေကြယ်နှစ်ပွင့်နှင့် ရဲတစ်ဦးက “ဒီနားမှာမရပ်ကြပါနဲ့။ ကားစီးချင်ရင် ရုပ်ရှင်ရုံဖက်ကသွားစီးကြပါ” ဆိုပြီး အော်လံကြီးဖြင့်လိုက်အော်သည်။
လုံထိန်းတွေက ဆူးလေဘုရားရှေ့မှာ သံဆူးကြိုးတွေတားလိုက်သည်။ စစ်သားတွေက လမ်းအပြည့်ရင်ဘောင်တန်း စီလိုက်ကြတာတွေ့ရသည်။ ကားစီးချင်တာမဟုတ်သော
လူတွေက မီးပွိုင့်ကိုကျော်ပြီး နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံဖက်ကိုရောက်လာကြသည်။
ကျနော်လည်း တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာရင်း “ဝေါ”ခနဲအသံကြီးကြားလိုက်ရသဖြင့် ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်ဟု လှမ်း ကြည့်လိုက်တော့ ဆူးလေမီးပွိုင့်ကိုလူတွေပိတ်လိုက်ကြပြီ။
စောစောကကျနော်မတွေ့သောလူများက ဘယ်ချောင်မှ ဘယ်လိုထွက်လာကြသည်မသိ။ ဆူးလေမီးပွိုင့်မှာ ပြည့်နှက်သွားသည်။ ကားတွေလည်း ပိတ်ကုန်သည်။ လက်ခုပ်သံတွေက တဖြောင်းဖြောင်းဆူညံနေပြီဖြစ်သည်။
လုံထိန်းရဲနှင့် စစ်သားများက ဆူးလေဘုရားကိုကျောပေးကို မီးပွိုင့်အစပ်ထိ ရောက်နေကြသည်။ ဒီဖက်တစ်ခြမ်းမှာက လူထုကြီးကနေရာယူထားသည်။ အနော်ရထာလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို
လည်း ပိတ်ထားကြသည်။ လက်ခုပ်သံတွေက ဆက်၍ဆက်၍ ထွက်ပေါ်နေသည်။ မကြာမီ မျက်မှန်နှင့်ကိုယ်တော်တစ်ပါး ၀င်လာသည်။ လူထုက လက်အုပ်ချီ၍ နေရာဖယ်ပေးကြ၏။ လူထုကြားတွင် ဒေါင်းအလံတလူလူနှင့် ရှေ့ဆုံးသို့ထွက်လာကြသူတချို့ကိုလည်းတွေ့ရ၏။
မကြာမီ ဦးဆောင်သူဟု ထင်မှတ်ရသူများက လူထုကို လမ်းပေါ်ထိုင်ခိုင်းသည်။ တချို့ကထိုင်သည်။ တချို့က ပေကပ်နေသည်။ ထို့နောက် မေတ္တာပို့တေးသံလွင်လွင် စကြားရ၏။ အားလုံးလက်အုပ်ချီထားကြသည်။
တချို့က ညီညာဖျဖျရွတ်ကြသည်။ တချို့က အရပ်ဆယ်မျက်နှာကို ကိုယ့်ပါးစပ်ဖျားပေါ်ရာ စရွတ်ကြသည်။
” အရှေ့အရပ်၌ရှိသော…….” အစချီကာ
အချိန်ကြာမြင့်စွာ မေတ္တာပို့လိုက်၊ လက်ခုပ်တီးလိုက်ပြုလုပ်ကြပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သီချင်း
ကို ဆိုကြပြန်သည်။ ကျနော့်လက်ဖ၀ါးများလည်း ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်၍ အသံမှာ လည်း ပြာတာတာဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ဆူးလေကုန်းတံတားအောက်မှာ ကျောင်းသားလူငယ် တစ်စု ကြွေးကြော်သံများ တိုင်လျှက်ရှိသည်။ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသူတို့ဖက်ကလည်း လူစုခွဲရန် အဆက်မပြတ်သတိပေးလာသည်။ မေတ္တာပို့လိုက်၊ သီချင်းဆိုလိုက်ဖြင့်
အချိန်ကြာလာတော့ တချို့က ရိုးအီလာပုံရသည်။ လူအုပ်ကြားမှ မအေနှမ ကလော်တုတ်သံ ကြိုကြားကြိုကြား ကြားလာရသည်။
သို့နှင့် ပရိသတ်မျှော်လင့်နေသော မင်းသားများ ထွက်လာပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း ၀င်လာပြီး ထရိတ်ဒါးဟိုတယ်ဘေးမှ ကွေ့ချလာသော အင်အားအပြည့်ဖြင့်စစ်ကားကြီးများက ဆူးလေဘုရားလမ်းအတိုင်း လူထုနောက်မှ တိုးဝင်လာသည်။
ရှေ့မှာက လမ်းပေါ်တန်းစီပိတ်ရပ်ထားသော အင်အားစု။ နောက်မှာက ကားများဖြင့်ပိတ် ၀င်လာသော အင်အားစု။ အခြေအနေမကောင်းမှန်း ရိပ်မိသူတချို့ တဖြည်းဖြည်းနောက် ဆုတ်သွားသည်။ အများစုကတော့ စစ်သားတွေကိုမြင်တာနှင့် သွေးပိုဆူလာကြ သည်။ ဆဲဆိုအော်ဟစ်လာကြသည်။ လက်ခုပ်တီးသံများ ပိုကျယ်လာသည်။ ကြွေးကြော်သံများ ပိုမြိုင်လာသည်။
အလံကိုင်တချို့ နောက်ပြန်ဆုတ်သည်။ လူထုကြားမှာဆိုတော့ လူကိုမမြင်ရ။ အလံကြီး သာ နောက်သို့ တရွေ့ရွေ့ရောက်ရောက်လာတာမြင်ရသည်။ ရုတ်တရက် လူအုပ်ကြီးထံ မှ ရေသန့်ဘူးများ၊ ဖိနပ်များ လေထဲလွင့်သွားသည်။
ထိုအရာတွေက ဆူးလေမီးပွိုင့်အလယ်ရောက်နေပြီဖြစ်သော စစ်ကားများဆီသို့ ဦးတည်သွားသည်။ ကားနံရံခေါင်မိုးများပေါ် တဘုန်းဘုန်းမြည်ကုန်သည်။ ပြီးတာနှင့် ဖုန်း…. ဒိန်း… ဖုန်း… ဒိန်းနှင့် စကြားရတော့တာဖြစ်သည်။
အသံကြားတာနှင့် လူအုပ်ကြီးကွဲပြိုသွားသည်။ လွတ်မည်ထင်ရာ အရပ်လေးမျက်နှာ သို့ လျှောက်ပြေးကြသည်။ ကျနော်လည်း သုတ်ခနဲလစ်သည်။ အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှနေ ပန်းဆိုးတန်းဖက်သို့ လစ်တာဖြစ်သည်။
သို့သော် ပန်းဆိုးတန်းဝေးစွ။ ၃၃လမ်းထိပ်ပင်မရောက်လိုက်။ သေနတ်သံများထပ်ထွက် လာသည်။ ထိုခဏမှာ မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားများနှင့် အသားကျနေသည့် ကျနော်တို့ မြန်မာ ပရိသတ်က ပြိုင်တူအော်ကြသည်။
““၀ပ်… ၀ပ်… ၀ပ်…”” တဲ့။
၀ပ်… ဆိုပြီးအော်တော့ လမ်းတလျှောက်ပြည့်သိပ်လျှက် တိုးဝှေ့ပြေးလွှားနေကြသူများက ချက်ချင်းပင် ခေါင်းပေါ်လက်နှစ်ဖက် “ဖတ်” ခနဲတင်ပြီး ၀ပ်လိုက်ကြသည်။ ထိုသို့ အားလုံးက ရုတ်တရက်ဝပ်လိုက်သောအခါပြေးနေသော လူများခလုတ်တိုက်ကာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးထပ်၍ လဲပြိုကုန်ကြသည်။
ကျနော့်အပေါ်တွင် မိန်းမ၀၀ကြီးတစ်ဦးပိနေသည်။ သူ့ကိုဖယ်သော်လည်းမရ။ အကြောက်လွန်ပြီး တက်မလိုချက်မလိုဖြစ်နေသည်။ ကျနော့်ဘေးမှာ ဦးလေးအရွယ်လူတစ်ဦး ပုဆိုးမပါ၊ အောက်ခံဘောင်းဘီကလေးဖြင့် ပုံကျနေသည်။ သူ့အပေါ်မှာလည်း နှစ်ယောက်ခန့်ရှိ သည်။ ဘယ်သူမှထလို့မရ။
လမ်းပေါ်မှာ လူတစ်ဦးထွက်ကျကျန်ခဲ့ပုံရသည့် တစ်ထောင်တန် ငါးရာတန်
ငွေစက္ကူများစွာ ပြန့်ကျဲနေသည်။ ဘယ်သူမှမကောက်အား။ ကျနော်အားအပြည့်ထုတ်ကာ ရုန်းထွက်သည်။ မရ။ မရတာက ကြောက်ဒူးတဆတ်ဆတ်တုန်နေလို့ဖြစ်သည်။ ရင်ထဲမှာလည်း တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်။ သေပြီဆရာဟုလည်း တွေးမိသည်။
ဆူးလေမှ အသားကုန်ပြေးလာသည့် လူတစ်ဦး ဓာတ်တိုင်ကိုဝင်တိုက် ကာ မှောက်လဲသွားတာမြင်လိုက်သေးသည်။ ကြက်ခြေနီတံဆိပ်ကပ်ထားသူတစ်ဦးက သူ့ကိုဆွဲထူ၍ လမ်းကြားထဲခေါ်သွားသည်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ လဲနေသည့်လူတွေကြားမှ အားတင်းပြီးရုန်းထွက်သည်။ ဗြွတ်ခနဲ လူသာထွက်လာသည်။ ဖိနပ်နှစ်ဖက်လုံးကျန်ခဲ့သည်။ ဖိနပ်ဗလာနှင့်ပြေးစဉ်မှာပင် လုံထိန်းရဲတွေရောက်လာပြီး လဲနေသည့်လူတွေကို ၀င်ရိုက်သည်။ ကျနော်ပြေးစဉ် နှစ်ပွင့်နှင့်
လုံထိန်းတစ်ဦးက ကျနော့်ဖက်သို့လက်ညိုးထိုးပြီး အဲဒီကောင်ကိုဖမ်း… ဖမ်းဟု အော်သည်။
သွားပြီ… မိဘီ… လုံထိန်းသုံးဦးပြေးဝင်လာသည်။
ကျနော့်ကိုကျော်ကာ နောက်မှလည်ကတုံးအဖြူ၊ ကချင်ပုဆိုးနှင့်လူတစ်ဦးကို ၀ိုင်းဖမ်းကြသည်။
တော်ပါသေးရဲ့… အဟီး.. ဟု သက်ပြင်းချကာ ပန်းဆိုးတန်းဖက်သို့ သုတ်ချေတင်ခဲ့သည်။
← ““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း”” (တတိယပိုင်း)
မောင်ဥက္ကာနှင့် အပြောအဆို →
One comment on “““အိပ်မက်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း”” (စတုတ္ထပိုင်း)”
kyinnarthu on December 29, 2014 at 7:09 am said:
လးတွေထပ်ရေးဘာအုံး စိတ်ပေါက်တဲ့တိုင်းသာရေးပါ သေးပေါက်အောင်ရီချင်သေးလို့ပါ